Best Windows Sisitimu Yekutarisa Maturusi: Wepamusoro 6 Wakaongororwa muna 2018
System Monitoring inogona kunetsa kune vazhinji maneja. Hazvisi izvo zvisingawanzoitika kunhasi network kuve nemakumi kana kunyange mazana evhava. Uye iwe unofanirwa kuramba uine ziso rakatarisa pane yega yega yega paramende yekushandisa. Apa ndipo panogona kuuya chishandiso chekutarisa system. Kazhinji, masisitimu aya ano tarisa maseva ako uye zvimwe zvishandiso iwe uchikwanisa kutarisa pane mamwe mabasa anobudirira. Uye kana chimwe chinhu chikatadza kufamba, kana paramende yekushanda ikapfuura nhanho yayo, sisitimu yacho inokuzivisa. Nhasi, tiri kutarisa matanhatu ezvakanakisa Windows system yekuongorora maturusi.
Tichatanga nekukurukura kudiwa kwekutarisa system. Tichaona masisitimu akaomarara ezuva ranhasi ane zvinhu zvakawanda zvekuti hazvitomboita kuti titarise zvese pasina rubatsiro, Tichazokurukura zvakavakirwa-mukati maturusi maturusi aripo mune yega system. Iwo mavambo akanaka ekutanga kuti unzwisise kuti chii chinonzi kuongorora. Izvi zvichatiunzira kune maficha uye mashandiro esisitimu yekutarisa chishandiso. Izvi ndizvo zvavanoita uye nemabatiro avanozviita. Uye kana tese tangove papeji rimwe chete, tichadzokorora matanhatu akanakisa masystem ekutarisa maturusi e Windows.
Izvo Zvido zveKurongwa Kuongorora Zvishandiso
Kunyangwe zvingadai zvichishanda, hatigoni kuva nemaziso kwose kwose. Asi, tinofanira kuramba tichiziva nezvehutano hwezvinhu zvose zvatinoshandisa. Nhasi maitiro ari nenzira yakaoma kunzwisisa kupfuura aya emakore 10 apfuura. Uye vane zvakawanda zvakawanda zvikamu. Saizvozvowo, humwe hutano husati hwave huchishanda pane imwe yemakombiyuta. Chimwe chezvinhu izvi zvinoshandisa chikamu chemagadzirirwo ayo mashandisiro. Uye apo zvigadzirwa zvese zvinoshandiswa kumusoro, zvinhu zvinotanga kuipa. Nzira dzinoitika, zvikanganiso zvinoitika. Zvinhu hazvifambi zvakanaka.
Kuti uratidze kuti zvinhu zvinogara zvichifamba zvakanaka, unoda kugara uchitarisa zvigadziro zvako zvekushandisa kuitira kuti iwe unogona kugadzirisa matanho matambudziko asati asvika. Hazvisi zvisizvo kuti mutongi wehurongwa ave nemhosva yekushanda kwezvizhinji kana zvisina mazana emagadziri, zvichiita kuti zvive zvisingabviri kuzvitarisa zvose. Pane zvakawanda zvezvo.
Imwe dambudziko nderokuti dzakawanda sevashandi zvigadzirisiti zvisingasviki nyore uye imwe shandisirwo inofanira kushandiswa kuigamuchira. Mainframe makombiyuta ekare aiva nemhando dzose dzejiji uye chiedza pamagetsi avo ekugadzirisa vatungamiri vemamiriro asina kunaka. Mamwe maPC ekutanga nemichina yekugadzira mitambo yakanga ine zvigadziri zveavo-ndinorangarira kombiyuta yemusha yakanga ine LED iyo yaipenya nguva dzose apo kukanganisa kwaikurwa kana iyi ye-ethernet hub yakanga ine "kurwisana" LED-asi yakabva yanyangarika.
Iyi ndiyo iyo masangano ekuongorora zvinhu anoshandiswa. Vanobvumira vatungamiri vehurongwa kushandisa nguva yavo pane mamwe mabasa anovaka uye anobatsira apo chigadzirwa chacho chinotarisa, kutarisa mutungamiri kana chimwe chinhu chisina kunaka, kazhinji isati yava nyaya chaiye. Izvi zvinopa mutungamiri wehurongwa nguva yakakwana yekuita uye kugadzirisa dambudziko.
Nharaunda dzakasarudzika ndeye yakatarwa yekushandisa kesi inoda kuongororwa kwakanangana. Kana zviitiko zvinoverengeka zvakafanira kugovana zviwanikwa zveSeva inomiririra, iyo inomiririra uye yega yega muenzaniso inoda kuongororwa. Uye inomiririra sevha ine yakatarwa inoshanda paramende uye yekutarisa zvinodiwa izvo zvakawanda Windows system yekutarisa maturusi kushomeka. Kune avo, iwe unoda zvakananga VM kuongorora zvishandiso.
Yakavakwa muIkuona Zvishandiso
Mazhinji mashandiro emazuva ano ekushandisa anosanganisira imwe nzira yekuvakira-mukati yekutarisa chishandiso Windows, semuenzaniso, ine iyo Task Manager. Ichi ndicho chigadzirwa chakanakisisa chakanakirwa nemutungamiri wehurongwa wese. Nzvimbo yayo huru icharatidza purogiramu, memory, disk, network, uye graphics purogiramu kushandiswa kwega yega yega inoshanda. Bhuku rayo rekuita rinokupa mazamu akajeka ekushandurwa kwemashure emakore emitambo yakasiyana-siyana inoshandisa shanduro yekushandisa, memory, disk, uye imwe nhepfenyuro inoshandiswa.
Chimwe chishandiso chave chiripo pane Windows masystem kwechinguva asi asinganyanyo shandiswa nhasi nekuti yakawanda yeruzivo iyo yainopa iko zvino yave kuwanikwa mu Windows Task Manager anonzi iyo Resource Monitor. Inopa huwandu hwemashoko akafanana anowanikwa kubva kumutariri webasa asi inonyanya kurongedza kuratidza kushandiswa kwezvinhu zvose zviri zviviri hardware uye software zvishandiswa nemaitiro akasiyana iye zvino ari kushanda.
Vatongi veSystem vane Unix kana Linux background vangangodaro vanoziva nemitambo miviri yekushandisa-mutsara: ps uye pamusoro. Iyo yekare inotarisa zvose zvayo zvino inoshandisa maitiro uye zvingasarudzwa purogiramu yavo nekuyeuka kushandiswa. Nezve pamusoro, iyo imwe shandiswa kunyange iyo inowanzobatanidza mamwe mashoko akabudiswa mumutauro wematauri.
Zviratidzo Uye Kushanda Kwekugadzirisa Zvirongwa zveSystem
Sangano rekuongorora zvishandiso zvose zvakasiyana. Uye apo imwe neimwe ichiti ive nani kune vamwe, muzvokwadi, yose yakafanana zvakafanana mumashandiro avo ekutanga. isu takanyora urongwa hwezvinhu zvikuru zvaunowana mune dzakawanda hurongwa hwekuongorora. Inofanira kukubatsira kuti ujekese zvido zvako zvekuongorora nekuenzanisa zvishandiso zvakasiyana.
Icho chinonyanya kukosha chekushanda kwekuongorora zvishandiso avo kukwanisa kurega kutarisa sevavhariji akawanda. Nzira dzakanakisisa dzichaona zvirongwa zvakasiyana-siyana zvekushanda uye vamwe vachagovera kuongorora kuti zvive nyore kushandiswa kwemasayithi akawanda. Zvimwe zvishandiso zvichapawo kugadzirisa-kugadzirisa nzira yekutsvaga purogiramu yako yekutengesa seunowedzera imwe nhare yakatarisa inowanikwa. Izvi zvinogona kunge iri nguva imwe chete, mushure-yekugadzirisa chirongwa kana chinopfuurira chinowedzera chero seva itsva kana ichikwidzwa. Kuongorora zvishandiso kunofanirwa kunge kusinganzwisisiki sezvinobvira. Iwe haudi kuti vaise rimwe mutoro pamashandi enyu. Vanofanirawo kunge vanogona kupera. Nhare yako inonyanya kukura nekufamba kwenguva uye nhumbi yako yekuongorora inokwanisa kukwanisa kutevera kukura ikoko.
Kazhinji, hurongwa hwekuongorora zvishandiso huchacherechedza zvakasiyana-siyana zvemasvomeri zvakadai sekuwanikwa kwevhavha, kushandiswa kwe CPU, kushandiswa kwepfungwa, disk space, kutengesa kwe CPU, uye magetsi ekugoverana. Kana zvichishanda, vamwe vanozoyera zvakare kupindura nguva uye kuisa / kutora zvishoma. Kushandisa kwekushandiswa kunowanzoonekwawo nehurongwa hwekuongorora zvinhu. Vaya vakanakisisa vanoshandisa ruzivo rwakadzika rwemaitiro ekuongorora maverengi ematriciti awo chaiwo. Izvi zvinonyanya kukosha kune web server kana seva server, semuenzaniso.
Izvo zvinotevera basa guru rekuongorora zvishandiso zvinoshandura. Ndekupi kushandiswa kwekutarisa nzvimbo yako kana pasina chakaitika kana zvinhu zvisingakanganisi? Kuongorora maitiro kuchagadzirisa vatungamiri veimwe nzira isingaenzaniswi. Zvizhinji zvehurongwa zvinouya nekufananidza kushandura zvikumbaridzo kunyange zvazvo kuzviisa pazvinhu zvaunoda nguva dzose zvinogoneka uye zvinokurudzirwa. Nzira dzesayenzi uye miviri yekucherechedza inogona kugadziriswa. Nzira dzakawanda dzichapupurira bhokisi remashoko padziviriro yavo asi zvakare kutumira email, SMS, pager messages, nezvimwewo. Dzimwe sangano ichaitawo zviito-zvichivakwa mukati kana tsika dzezvinyorwa-apo mazano ari kusimudzwa.
Izvozvo ndizvo zvinonyanya kushandiswa zvinowanzoitwa nehurongwa hwekuongorora zvishandiso zvinoshandiswa asi pane dzimwe nguva zvakawanda. Kuzivisa kunowanzotora chikamu chinokosha chekuongorora zvishandiso nekanakisisa inopa zvose zviripo zvakagadzirwa uye dzakagadzirwa nemishumo. Kuzivisa, zvechokwadi, zvinorevawo kukohwa kwezvakaitika kare.
Kana mavharivha asiri maitiro aunoda kutarisa, zvichida iwe unoda chimwe chinhu chakashandiswa. Semuenzaniso, maikironi ekubatanidza-sekushandura uye routers-ane zvakasiyana zvakanyanya kuongorora zvinoshandiswa pane sevhavha. Nokudaro, mamwe maitiro ekutsvaga akazvitsaurira aripo kune aya majaira. Vanovimba ne Simple Network Management Protocol kana paNetFlow kuwana ruzivo rwekushandura kwedhidhiyo yekushandisa uye kuratidza nenzira yakakosha.
Iyo Yakanakisa Sisitimu Yekutarisa Zvishandiso zve Windows
Saka, ikozvino zvave pachena kuti nei ungangoda a Windows system yekutarisa chishandiso uye kuti iwe uzive zvimwe zveanoshanda iwe aunofanirwa kunge uchitsvaga, ngatienderere mberi nekudzokorora akasiyana maturusi atinokurudzira. Zvimwe ndezvemahara, zvimwe zvinobhadharwa kana kunyoreswa-zvakatemerwa asi zvese zvinopa rubatsiro runodiwa zvakanyanya kana zvasvika pakuchengeta ziso riri padyo nemaseva ako.
Kana iwe usati wakaziva SolarWinds, zvinopfuura nguva yaunodzidza pamusoro pekambani. SolarWinds inoita zvimwe zvekunakidza nheyo uye hurongwa hwehutungamiri zvishandiso. SolarWinds inozivikanwawo nekugadzira zvishoma-chaizvoizvo, zvishoma zvishoma-zvigadzirwa zvebasa-zvakasununguka zvakadai seSong Subnet Calculator kana Server Health Monitor, iyo nhamba yekutanga yekupinda pane yedu runyorwa rwevatanhatu akanakisa Windows system yekuongorora maturusi.
SolarWinds Server Health Monitor, kana SHM, inogona kutarisa kuwanikwa, hutano, nekushanda kwevashumiri ve5. Iyi inopera zvakakomba kunyange zvazvo inogona kukwana kune dzimwe mabhizimisi maduku. Izvo zvishomawo mune izvo zvingagona kutarisa. Inongoshanda chete naDell PowerEdge ™, HP ProLiant ™, uye IBM eServer ™ xSeries seva. Inotsigirawo maitiro mashomanana emakona kubva kuDell uye HP pamwe chete neVMware vashoma hypervisors. Iyo shandiswa inoshandisa kusanganiswa kwenzira dzakadai seSNMP, WMI, uye CIM kuti ibudise dhevhisi inoshanda kubva kumaseva inotarisa.
Dashboard yedhidhiyo yacho inokuratidza hutano huzhinji hwevashandi vanoongororwa. Dzimwe sevhavha dzinogona kudonongedzwa kuti uwane urongwa hwematongerwo ose anoongororwa iwe unogonawo kutsvaga tsanangudzo yakawanda. Inokupa kunzwisisa kune hutano huzhinji hweboka duku remaseva. Hatina kutaura nezvekucherechedza kana nhoroondo nekuda kwechikonzero chakajeka, hapana. Iri ndiro chiyero chekupinda-chechi chinoda kuti iwe uchengete ziso pahwindo rayo iro, zvechokwadi, riri nani pane kutarisa mashanu server seki.
2. SolarWinds Server Uye Kuongorora Monitor (Free Trial)
Zvadaro pane zvinyorwa zvedu ndeimwe shanduro yeSolarWinds. The Server and Application Monitor inotanga apo Server HealthMonitor inomira. Ndicho chinhu chakafanana asi nehuwandu hwakawanda huripo. Icho chikamu chesangano reOrion rekushandisa nekushandisa zvishandiso. Takatarisa pane imwe shandiso kubva kune imwe sangano reOrion mune imwe nyaya ichangopfuura: Best Free Slow Collectors and Analyzers Reviewed in 2018.
Sezvo zita rayo rinoreva, chikwata ichi chakakwirira hachizoongorori mavhavharivha asiwo maitiro anoshandiswa pavari. Icho mhinduro yakakwana inogona kuwedzera kubva kumatanho maduku kusvika kune makuru, ma-network-site network makambani nemazana emaseva, zvose zvepanyama uye zvechokwadi. Inogonawo kutarisa sevhavha mumamiriro ezvinhu egore akadai seaya anobva kuAmerica Web Services uye Microsoft Azure.
HERE FREE 30-DAY TRIAL: SolarWinds Server & App Wongorora
Paunotanga kuisa, chigadziro chichazvionera-maoko mashizha nemashandisi pane network yako. Izvozvo chete, zvechokwadi, unogona kutanga kutarisa iwo. Kechipiri kuwanikwa scan kunodiwa kuti uone maitiro anoshanda pane imwe sevha. Nokusarudza, unogona kupa urongwa hwemapurogiramu uye uine scan chete tarisa avo.
Kana ikasimuka uye ichimhanya, kushandiswa kweServer uye Application Monitor inonyanya. Kushandura Node Detail, semuenzaniso, ichakuratidza kuti node yekushanda uye utano hwehutano. Graphical uye Tabular formats zvinowanika kune mashoko akaratidzwa.
Mutengo weSolarWinds Server neKushandisa Monitor inotanga pazasi pe $ 3 000. Kana iwe uchida kuedza usati wazvitenga, shanduro yepachena yeC30-day inowanika pakunyorera.
WhatsUp Gold kubva kuIpswitch iri rimwe zita rakajairika mumunda wekutarisa maturusi. Icho chaimbove chingori kumusoro-kana-pasi chekutarisa chishandiso chakashanduka kuita imwe yeakanakisa system uye network yekutarisa chikuva. Iine zvese zvinotarisirwa kubva ku Windows system yekutarisa chishandiso. Iwe unowana kuongororwa kweanoshanda ma parameter- ehe saizvozvo- uye iwe zvakare une zvakakwana kugadzirisa nekuzivisa.
Kugadzirisa WhatsUp Gold iri nyore, nekuda kwejini yake yekutsvaga inozowana zvigadziro zvako uye kuzviwedzera kune yekuona console. Ichawana masheya chaiwo, mavharivha chaiwo, mashumiri emakore, maitiro nemichina yekushandisa. Chigadzirwa chacho chine maonero emepu uko unogona kuona kuwirirana kwezvikamu zvakasiyana. Inotsvaga kuti uwane mamwe mashoko pamusoro pechirongwa chimwe nechimwe.
WhatsUp Gold inowanikwa sehurukuro yakasununguka asi inogumira kuongororwa zvigadzirwa zvishanu chete. Mari yepamutemo inowanikwa inowanika mumatatu matatu ekuwedzera kwehutano uye mutengo wakatarwa nhamba yezviyero zvinoongororwa. Iko kusununguka, nguva isingagoni kuongororwa mharidzo inowanikwawo.
Nhamba yedu yechina yokupinda ndiyo OpManager kubva kuManageEngine. ManageEngine inozivikanwawo nokugadzira mamwe mashizha makuru kubatsira vatungamiri kutarisira zvigadzirwa zvavo. IOpManager imwechete yakadaro. Icho chimwe chezvinhu zvose-mu-imwe purogiramu iyo inotarisa server yako (yemuviri uye yakakwana) uye yako inyanzvi yezvigadzirwa zvekushandisa uye yakuchenjerera iwe nokukurumidza kana chimwe chinhu chiri kunze kwepamusoro.
ManageEngine inotaura kuti OpManager inogona kuiswa mumaminitsi mashoma maviri. Ichazowana zvigadzirwa zvako uye utange kutarisa izvo pasina kudiwa zvakakosha masanho matanho. Ikopa rine ine intuitive user interface apo iwe uchazowana nyore nyore ruzivo rwaunoda. Iyo inewo yakaisvonaka yakawanda yakagara yakavakwa mishumo pamwe chete netsika. Chiratidzo chekugadzirwa kwezvinhu chacho zvakare chakakwana kwazvo.
The ManageEngine OpManager inowanikwa muIndential edition yezvidiki uye zvepamabhizimisi zvemabhizimisi nepamusoro pemashandi ane chiuru pamatoro anotanga paanopfuura $ 700 yezvikwata zve 25. Kune masangano makuru, mune yebhizimusi edition iro rinogona kukwira kusvika kune zviuru gumi zvemagetsi. Mutengo wayo unotanga pasi pe $ 20k yezvikwata zve 500. Mutengo wezvinyorwa zvose zviri zviviri zvakasiyana maererano nehuwandu hwemajeri akaongororwa uye kusunungurwa kwezuva re 30 zuva rinowanikawo.
Iwe unogona kunge watoziva Nagios Core, nzvimbo yakasununguka yekuongorora nzvimbo iyo yave ichifarira mukurumbira wakaisvonaka kwemakore. Nagios XI, iyo yekutengeserana yeNagios, inogona kufungidzirwa seNagios on steroids. Iine pfuma yakagadzirirwa yakagadziriswa, kuiswa nyore nyore nekugadzirisa, uye imwe inopenya yakanzwa. Nagios XI ichokwadi yebhizimisi-grade server uye network software. Iyo inoshandisa injini imwechete iyo sehama yayo yakasununguka asi bolts-mune simba guru, customizable GUI.
Nagios XI inopa yose-inosanganisira kuongorora sarudzo yezvidzidzo, maitirwo, maitiro ekushandura, mitambo yemagetsi, maitiro ematriki, uye nhepfenyuro yehutano. Uye kana izvozvo zvisingakwani, chechitatu-party add-ons inokutendera kuti uongorore zvese zvese zvekushanda, mazano, uye maitiro.
Nagios XI inowanikwa muEast and Enterprise editions. Izvozvo zvinowedzera kushanda uye zvinosanganisira zvimwe zvidimbu zvekubatsira mukugadzira kukuru, kutarisirwa, uye kugadziriswa kwehupfumi. Kana iwe uchida kuedza chigadzirwa, shanduro yakasununguka inowanikwa asi inogumira kuongorora zvinomwe zvinomwe.
Our entry in, Zabbix ndiyo imwe yepamusoro yakasununguka uye yakazaruka-source system monitoring platform. Ive makore anopfuura 20 uye ine vashandi vashoma 300 000 pasi rose. Iyi ichokwadi yebhizimisi-grade grade iyo inogona kukwira kumakona makuru kwazvo. Zabbix inotarisa mitambo, mashuva-zvose zvirimo uye gore-based, uye mabasa anoshanda pane mavhareji iwayo.
Kunyange zvazvo chigadzirwa chacho chisina kusununguka, zvibvumirano zvekambani zvinogona kutengwa kubva kuZabbix. Pakati pezvinonyanya kuzivikanwa mazinga mashanu ekutsigirwa kwekambani uye chirongwa chakazara chekudzidzisa chirongwa. Kana ukasarudza kuramba uri parutivi rwokusununguka, rubatsiro rwemunharaunda runowanikwa uye rwakanaka chaizvo.
Nyaya-yakachenjera, Zabbix ine zvose zvaunotarisira kubva kumitikiti inodhura zviuru zvemadhora. Kushandura kwacho ndekwechipiri kune chimwe uye ndizvo zvazvakanyorwawo injini. Nengano yekutengesa yakaoma kukurova, iwe ungada kupa Zabbix kuedza.
Windows sisitimu yekutarisisa maturusi regai system manejimendi vanetseke nezvezvakakosha zvinhu ivo vachichengeta kutarisa maseva uye kunyorera kwavo. Chero yedu yepamusoro 6 yepamusoro Windows system yekutarisa chishandiso iri yakanakisa sarudzo. Kupfuura chero chinhu, sarudzo yako yepuratifomu inotungamirwa nezvako chaizvo zvaunoda uye zvaunofarira. Ese edu epamusoro matanhatu mapiki anogona kuyedzwa pasina muripo saka inzwa wakasununguka kuyedza uye edza mashoma kuti ave nechokwadi chekuti inoita zvaunoda.
Best Tools Kuti Uone MPLS Networks
5 Akanakisa Zvishandiso Zve Yakadzika Packet Kuongorora muna 2018
Containerization Yakatsanangurwa: Best Container Monitoring Equipment & Solutions muna 2020
5 Dzakanakisa dzimwe nzira dzeMicrosoft Access (2020 Edition)
Filed Under: dostępne narzędzia do monitorowania systemu.